I-Sailor Moon Isizini 4: Idethi Yokukhishwa Iqinisekisiwe Noma Ikhanseliwe? - Ukuzijabulisa
I-Sailor Moon Isizini 4: Idethi Yokukhishwa Iqinisekisiwe Noma Ikhanseliwe?
I-Sailor Moon Crystal imayelana nani?
Ingabe kuzoba nesizini 4 ye-Sailor Moon?
Ingabe likhona idethi yokukhishwa kwe-Sailor Moon Season 4?
Lizoba yini itulo le-Sailor Moon Season 4?
Uchungechunge lwe-anime i-Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal lusekelwe kuphela ezinganekwaneni zika-Bishoujo Senshi Moon ezituswa ngokugxekayo. Ayisekho eyokuqala ekuziphendukeleni kwe-anime kwenganekwane nge-Sailor Moon Crystal. Ngeminyaka yawo-1990 kwethulwa amasizini ambalwa. NgoJulayi 5, 2014, uchungechunge lwavuswa futhi lwaboniswa okokuqala ngqa. Ngemva kweminyaka engu-20, i-Toei Animation yanquma ukuqalisa kabusha i-Sailor Moon nge-Sailor Moon Crystal ukuze zizijabulise emikhosini yokugubha iminyaka engu-20 ye-Sailor Moon. Uhlelo belulokhu luqhuba kahle futhi lukhule ngokuduma, nabalandeli befuna amasizini amasha. Izibuyekezo ze-Sailor Moon isizini 4 zingatholakala lapha!
I-Sailor Moon Crystal bekungolunye lochungechunge lwe-manga lokuqala ukunconywa kabanzi ngaphandle kwase-Japan, ngakho-ke kini enisanda kuhlanganyela, ake nginigcwalisele. U-Naoko Takeuchi, umbhali wama-manga, ushicilele lolu chungechunge kusukela ngo-1991 kuya ku-1997. Toei I-animation yabona ubukhulu bombukiso futhi yaqala ukuyibona njengochungechunge lwe-anime maduze nje.
Ngemva kokukhishwa kwe-anime, ukuthandwa kwalo mdlalo kwanda kakhulu. Le fandom enkulu esivele izuze inqwaba yamalungu amasha. Kimina, inkathi yeNyanga yaseSailor yayiyisikhumbuzo, futhi ukushisekela i-fandom kwakuphuma kulo mhlaba.
Ngawo-1990, i-Toei Entertainment yanquma ukubuyisa uchungechunge lwe-anime oludumile okwesibili futhi yamukele imvuselelo entsha yalolo chungechunge. Ngesitudiyo esifanayo esakhipha uchungechunge lokuqala lwe-anime ngeminyaka yawo-1990, lo mdlalo usuphinde wasebenza futhi wakhululwa ngo-2014.
Ngenkathi kuzwakala lezi zindaba, abalandeli babemagange ukufunda okwengeziwe ngo-Sentai kanye nempilo yabo ekuqaliseni kabusha uhlelo. Ngenxa yezithombe ezithuthukisiwe zanamuhla nobuchwepheshe, i-Reboot ngokungangabazeki izohluka. Yonke le mibono ivuse intshisekelo yababukeli nabazinikele kulo mdlalo.
Abalandeli balindele ngabomvu ukuthi kuphume isizini yesine yalolu chungechunge oselusakazwe kathathu. ISitudiyo mancane kakhulu amathuba okuba sikhansele lolu hlelo, ngenxa yokuthi beluqhuba kahle kangakanani.
Funda futhi: Ikilasi Lokubulala Isizini 3: Liqinisekisiwe Noma Likhanseliwe?
Maningi amathuba okuthi lolu chungechunge lwe-anime luvuselelwe isizini yesibili. Ngenxa yokuthi ababukeli abaningi bebelokhu bezibuza ukuthi sizoba khona yini esinye isiqephu salolu chungechunge noma cha, ngikholwa ukuthi iStudio ngeke iwonakalise lolu chungechunge ngokulukhansela.
Njengomphumela we-cliffhanger enkulu umdlalo ophele ngawo, kwaba sobala ukuthi uchungechunge luzoqhubeka nezahluko ezengeziwe. Ngesizini edlule yeSailor Moon Crystal, sabona ukuthi womathathu amantombazane ayephinde ahlanganiswa ekusithekeni kwelanga, futhi lokhu kwaqinisekiswa ngesizini elandelayo. Ekugcineni, sabona ukuthi enye yamantombazane yezwa insimbi, futhi umbukiso waphela ngaleso sikhathi.
Isizini 4 ye-Sailor Moon ayikakaqinisekiswa okwamanje.
Lokhu kushiya izethameli zibambe ongezansi ngalesi sigameko futhi kuphakamisa namathuba okuthi kumenyezelwe isizini yesibili. Uhlelo luthole izimpendulo eziningi ezinhle kanye nokuphawula okuvela kubalaleli . Ngokusho kolwazi lwakamuva, usuku lokukhishwa kochungechunge aluqinisekisiwe yinkampani yokukhiqiza.
Idethi yokukhishwa kwesitolimende sesine salolu chungechunge lwe-anime ayikamenyezelwa. Abalandeli abaqiniseki ngokuthi lolu chungechunge luzovuselelwa noma cha. Kunamathuba anele okuthi isitudiyo sivuselele uchungechunge, uma kubhekwa ukuthi isizini iphetha ngendlela yayo eyi-cliffhanger.
Ngo-2014, isizini yokuqala ye-Sailor Moon Crystal yenziwa yatholakala emphakathini. Uma kubhekwa ukuthi lolu hlelo luvuselelwe ngokusemthethweni lwaphinde lwakhishwa ngemuva kweminyaka emibili, maningi amathuba okuthi lubuye lolu chungechunge. Igebe langaphambilini leminyaka emibili phakathi kwamasizini liye labonwa ohlelweni eziqeshini ezedlule.
Funda futhi: I-Pokémon Master Journeys: Uchungechunge Lukhona Kubo Bonke Abalandeli
Uma abadali behlose ukukhipha isizini elandelayo maduze nje, i-covid-19 kungenzeka ibe nomthelela ekukhiqizweni kwayo. Izifo eziwubhadane zomhlaba sezivele zibe nomthelela ekukhiqizweni kochungechunge lwe-anime oluningana, futhi kungenzeka ukuthi lesi ngesinye sezizathu esenze ukuthi kungabi bikho uchungechunge olusha olukhishwe kuze kube manje. Kuze kube manje, azikho izindaba zokuthi umbukiso uzovuselelwa noma cha, futhi alukho usuku olumisiwe lokukhululwa kwawo.
Ngaphandle kwalokho, lolu chungechunge selubhukhe amafilimu amabili, eyodwa yawo ekhishwe ngoJuni 3, 2021. Manje, okufanele sikwenze nje ukulinda isimemezelo sesitolimende sesine yiziphathimandla ezifanele. Ungacabanga ' I-Sailor Moon Crystal Dream Arc Sailor Moon Eternal I-Movie' izosebenza njengengxenye engu-2 yesiphetho se-cliffhanger seSizini 3.
Ayikho i-trailer yeSizini 4 ye-Sailor Moon njengoba isizini ingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Uma sesithole imininingwane ethile esemthethweni, ngokuqinisekile sizobuyekeza i-athikili futhi uzokwazi!
Khonamanjalo, hlola le trailer engathathwa njengohlobo lweSizini 4 ngendlela yefilimu eza njengokulandelana kokuphela kweSizini 3.
Isizini 3 iya ngasemaphethelweni lapho uChibiusa, uMamoru, no-Usagi behlangene ukuze babone ukusitheka kwelanga. Kwenzeka lokhu nje, kuzwakala enye insimbi ngemuva. Uma nje wonke umuntu ekuzwa lokho, bonke baphendule amakhanda, futhi isiqephu sifike emaphethelweni.
Isitolimende sesine sizoqhubeka lapho isizini yesi-3 siphela khona, sibuyisele indaba lapho ibigcine khona. Ukungabaza mayelana nokuthi ngubani ozoshaya insimbi kuzoba yinto yokuqala nebalulekile ababukeli abazobe bebheke ngabomvu ukuyibona.
Uma kubhekwa ukuthi i-Studio isivele ikhiphe amafilimu amabili ane-Arc manga, mancane amathuba okuthi uchungechunge lufake noma yiziphi izinkomba kulo. Leyo indawo yesikhathi ehluke ngokuphelele kunale esikuyo njengamanje.
Funda futhi: Umthandi Wangempela We-Basketball Akakwazi-Miss Slam Dunk
UMisato Fukuen njengoSailor Chibi Moon
Kotono Mitsuishi njengoba Sailor Moon
U-Rina Satou njengo-Sailor Mars
Shizuka Itou njengoba Sailor Venus
U-Hisako Kanemoto njengo-Sailor Mercury
U-Ami Koshimizu njengo-Sailor Jupiter
Siyethemba ukuthi sizothola imininingwane ethile mayelana nesimo se-Sailor Moon Season 4. Uma kungenjalo, imuvi ingabhekwa njengeSizini 4 esebenza njengokulandelana kokuphela kweSizini 3. Siyabonga ngokufunda futhi uhlole okunye ukumbozwa kwe-anime okungakulinga ukuthi uqale ukubuka eminye imidlalo emisha!
Imfihlo ye-Skinwalker Ranch Isizini 3: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi!
U-Floyd Mayweather Net Worth: Umsebenzi, I-Biography, Ukutshalwa kwezimali